Khabiir Ku Takhasusay Dhinaca Duulimaadyada Diyaaradaha (Aviation Expert) Cabdikariim Cali Barjeex Oo Ka Waramaya Wuxuu Ku Soo Arkay Hargeysa Akhriso Qoraalkiisa | HALBEEG NEWS	Posts | Comments | E-mail / Home
Khabiir Ku Takhasusay Dhinaca Duulimaadyada Diyaaradaha (Aviation Expert) Cabdikariim Cali Barjeex Oo Ka Waramaya Wuxuu Ku Soo Arkay Hargeysa Akhriso Qoraalkiisa
Posted by Halbeeg News on Aug 1st, 2012 and filed under Editorial.
You can leave a response or trackback to this entry	Qormooyinkan taxanaha ah waxaan ku eegi doonaa waxyaabaha keena in inta badan safarka qurbejooga Somalidu ku tagaan wadanku inuu noqdo safar ay dhibaato kala kulmaan. Waxaan is dul taagi doonaa waxyaabaha sababa in safarkii wanaagsanaa ee uu qofku mudada dheer ku sii naaloonayey isaga oo rajeynayey inuu ku soo iloobi doono buuqa, cidhiidhiga cadhada iyo diiqada nolosha qurbuhu leedahay inuu safarkaasi isu bedelo socdaalkii Gulliver oo kale, farxadii, qosolkii iyo raynrayntiina ku dambeyso firka-nax, firxad iyo waxaan loo fadhiyin!
Sida caadiga ah wakhtiga ay soo dhowaadaan ama la gudogalo xilliyada fasaxa ee xagaaga, waxa dadka badankiisa gasha naruuro iyo nashaad hor leh. Waan dhoofayaa, lixda bisha ayaan ku qoranahay, aniga ayaa kaa horayna oo 2da ayaan baxayaa, Caruurta ayaan kaxaynayaa, Guri ayaan soo dhisanayaa, waan soo Guursanayaa, Waalidkii iyo ehelkii ayaan soo eegayaa, wadankii waxaan soo mooganaa 20 sanno iyo ereyo la mid ah ayaad ka maqlaysaa bulshada Somalida marka la isugu yimaado goobaha lagu sheekeysto sida makhaayadaha oo kale. Wakhtigan xagaaga ah, waxa midiyaha soofeysta xafiisyada tigidhada diyaaradaha jara ee loo yaqaano Travel Agencyga oo inta badan suuqoodu liito marka laga reebo wakhtiyada fasaxyada oo ganacsigoodu kor u kaco. Waxaad arkaysaa dad raabo raabo, koox koox ama keli keli ah oo baayacaya tigidhadii ay ku dhoofi lahaayeen. Intaa waxa barbar socda Telefoonada xafiisyada tigidhada oo qawda haya iyada oo ay khadka ku jiraan dad doonaya inay ogaadaan sicirkii ugu dambeeyey ee dhoofka. Inkasta oo wakhtigan xaadirka ah tigidhada inta badan diyaaradaha aduunka laga goosan karo shabakada Internetka iyada oo la isticmaalayo kaadhka Bankiga, hadana dad badan oo Soomaalidu ka mid tahay marka ay dhoofayaan waxa ay doorbidaan inay tigidhada ka goostaan dukaanka tigidhada iibiya. Sababo dhawr ah ayaa jira oo kelifaya in dadku Travel Agencyga ay ka doorbidaan Internetka. Waa ta koowaade, internetku malaha gorgortan ama baayacaad halka qofka Tigitka iibinaya aad kala hadli karto qiimo-dhimis. Waa ta labaade, dadka waaweyni kalsooni badan kuma qabaan aadna ugama dhaadhacsana quraarad-computer la yidhaahdo ayaa dhamaan hawshii safarkaaga kuu dhamaynaysa oo lagaga maarmayo inankii wanaagsanaa ee xafiiska Tigidhada joogay ee wax walba u dhamayn jirey marka ay dhoofayaan! Waa ta saddexaade, kuwo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ka hawlgala dhulka Somalida sida African Express oo kale malaha hab ama system internetka lagaga goosan karo tigidhadooda; halka keliya ee aad ka heli kartaana waa Travel Agency iyaga wakiil u ah. Arrinta afraad ee kelifaysa in dadku isticmaalaan Travel Agencygu waa iyada oo dadku ka baqaan haddii ay Internetka isticmaalaan inay wax ka khaldamaan Tigitkii iyo dhoofkoodii oo hadhaw meel ay u raacaan lacagtoodii iyo cid ay la xaajoodaan toona garan waayaan. Sidaa daraadeed waxay ku hagaagaan inankii isaga iyo reerkoodaba la garanayey ee dukaanka Tigidhada joogay ee haddii ay wax khaldamaan aan marnaba la waayahaynin! Hadaba, inkasta oo dadka badankiisu Travel Agency ka goostaan tigidhada si wax waliba OK u noqdaan, hadana waxa marar badan dhaca khaladaad badan oo dadka kharash gareeya lacag badan, ciil iyo cadho ku beera, nacsiiya safar dambe inay ku tagaan dalkii, dayn badan galiya, dhib iyo rafaad ku mutaan caruurta iyo dumarku, mararka qaarkoodna agabkii (shandadihii) ay la safrayeenba kaga lumaan amaba ka sii darane kelifa inay tigidho cusub goostaan. Doorasahada dariiqa iyo diyaaradu (Route and Airline) waa arrin aad muhiim u ah marka laga hadlayo safarka diyaaradaha waana halka koowaad ee khaladku ka yimaado. Inta badan dadka u socda Somaliya ama Somaliland waxa ay maraan dariiqa Dubai, halkaas oo ay ka sii qabsadaan diyaaradihii kale ee Somalida. Dadkani waxa ay raacaan diyaarado kala duwan oo qaarkood toos yihiin kuwo kalena magaalooyin dhexe ku sii hakadaan (Transfer/Transit).
Waxa isaguna irmaan dariiqa Addis-Ababa oo ay inta badan maraan dadka tagaya Somaliland ee raaca diyaarada Ethiopian Airlines. Sidoo kale, waxa dhowaan furmay dariiq ay dad koobani maraan, waa Istanbul, kaas oo ay maraan dadka tagaya Muqdishu kuwaas oo raaca diyaarada Turkish Airlines. Shakhsiyan, wax badan kama sheegi karo dariiqyada Addis-Ababa iyo Istanbul waxase aan ka faaloon karaa dariiqa Dubai maadaama aan muddo ka shaqeynayey Airportka Dubai xog-ogaalna u ahay diyaaradaha taga iyo duruufta ay la kulmaan Somalida marta Dubai. Tusaale ahaan, marka aad ka dhoofayso London ee aad u socoto Dubai, waxa jira in ka badan 16 diyaaradood oo u baxaya Dubai. Ugu yaraan 4 ka mid ah diyaaradahaas oo kala ah Emirates Airlines, British Airways, Royal Brunei iyo Virgin Atlantic waa toos duulimaadkoodu, halka inta soo hadhayna ay yihiin diyaarado sii maraya wadankii laga lahaa ka bacdina u sii gudbaya Dubai. Guud ahaan, adeegyada rakaabka (Passenger Service) ee shirkadaha diyaaradaha ee waaweyn ee u kala goosha aduunku wuu isku dhow-dhow yahay, waana la hubaa in diyaaradii aad raacdoba aanad ku qadi doonin, cunto iyo cabitaan dhadhan lehna aad ka heli doonto. Dhinaca madadaalada diyaarada gudaheeda (in-flight entertaintment) iyana waa waa la hubaa inaad heli doonto madadaalo kugu filan afkay doonto ha noqotee. Sidaa daraadeed, macno badan ma samaynayso inaad sii kala doorato laba diyaaradood oo hal magaalo ka baxaya saacado isku dhow si toos ahna u tagaya hal magaalo saacado isku dhow, haddii aan qiime badan, saacadao badan ama service kale oo aad ku kala doorataa jirin, waxase macno weyn sameynaya dariiqa (Route-ka) ay diyaaradu marayso ma toos baa mise waa qalooc? Sida caadiga ah dadku marka ay tigidhada goosanayaan waxa ay dalbadaan ama doorbidaan diyaarada ugu jaban ee tagaysa halka ay doonayaan. Waxase haboon in maanka lagu hayo in qiimaha tigidhada diyaarada tooska ah (direct flight) iyo ta soo wareegaysaa (Indirect flight) kala badnaan karo. Waxa dhici karaysa in diyaarada soo wareegaysaa ay ka jaban tahay qadar lacag ah ta tooska ah. Dadka qaar waxa ay lexejecleystaan waxoogaagaa lacagta ah ee farqiga ah waxaanay gundhada jaraan diyaarad ka soo wareegaysa Kalkata! Halka dadka qaarkiina doorbidaan in ay raacaan ta tooska ah si xumada safarku markaba uga jabto oo aan safarku ugu lulmin!. Waxaan xasuustaa qof aan garanayo oo ka tagay Yurubta galbeed una socday Dubai oo ka soo wareegay dalka Ruushka si uu u helo tigit jaban. Marka aad tahay family balaadhan oo safraya waxa dhici karta in qadarkaa yare ee lacagta ah ee u dhexeeya labada diyaaradood uu kuu save gareebo amaba aad hawlo kale ku deberato. Waxaadse ku talogashaa saacado ka badan saacadaha diyaarada tooska ahi ku tagayso Dubai inay kugu qaadan doonto. Waxa dhici karta in diyaarada aad raacday u baahato inay saacado dhawr ah fadhido candho-dhexe (magaaladii ay sii maraysay ka hor Dubai) si shidaal loogu shubo, Crewga loo bedelo, cunto iyo biyo cusub loo saaro, Checking loogu sameeyo amaba diyaarada laftigeeda la bedelo isla markaana ay khasab noqoto in diyaarada laga dego oo airportka la galo hadana diyaarad kale lagu wareego. Waxa dhici karta in caruurtu khaati ka istaagaan saacadahaa badan ee ay ciyaartii ka xaniban yihiin. Waxa dhici karta in dumarku ku dawakhaan kala badalka diyaaradaha una baahdaan caawimo gaar ahaan marka caruurtii ay wadeen ay faraha kala raacaan ee midiba jiho u dhaqaaqo gudaha Airportka (in badan ayaan tan oo kale goob joog u soo ahaa). Intaa waxa dheer in mararka qaarkood shandadihii qofku sitay ay ku hadhaan Airportkaa dhexe ee lagu sii degey, qofkiina uu Dubai gaadho isaga oo aan boorsooyinkiisii la socon flightka. Iyada oo laga yaabo in saacado yar ka dib uu qofku ku qoran yahay diyaaradii u qaadi lahayd Somaliland/Somalia isla markaana uu qofkaasi ku khasban yahay in uu sidaa ku baxo isaga oo aan wadan boorsooyinkiisii hadyadaha iyo alaabta shakhsiga ahi ku jirtey. Haddii uu nasiib leeyahay oo hooyadii u ducaysey, marka ay ugu soo horeyso waxa uu boorsooyinkaa heli karaa maalmo ka dib, haddiiba aan sidaa lagu waayin. Dhibaatooyinkaa ka dhasha diyaaradaha aan tooska ahayni waa wax inta badan dhaca oo aan anigu shakhsiyan qaarkood goob joog u soo ahaa madaarka Dubai. Hase yeeshee taa macnaheedu maaha in qof kasta oo raaca diyaarad aan toos ahayni inuu la kulmayo dhibtan oo kale. Waxa jira flightyo badan oo aan toos ahayn oo dadku iyaga oo nafis ah oo raaxo dareemaya ay ka soo degaan. Sidaa daraadeed, waxaan qaybtan ku soo gebogebeynayaa, dhoofe, marka aad dhoofayso haddii ay suurtogal kuu tahay raac diyaarad toos ah (direct flight) si aad saacado yar hawada ugu jirto, alaabtaadana u hesho marka aad cagaha dhigto halkaad u socotay, hubaalna u noqoto in agabkaagu kula raaco diyaarada aad u raacaysey Somaliland/Somaliya.
This post has been viewed 539 times.	Categories: Editorial